पूर्वसभामुखहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा: कसको स्थिति के छ? - Gaule Media ::
Home/समाचार/पूर्वसभामुखहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा: कसको स्थिति के छ?
ramsharan२५ कार्तिक २०७४, शनिबार ०२:२६
काठमाडौं, कात्तिक २५ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चार जना पूर्वसभामुख चुनावी मैदानमा छन् । नेपालको इतिहासमा ६ जना पूर्वसभामुख रहेकोमा नेपालको पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन भइसकेको छ । उनी विसं २०१५ सालको निर्वाचनपछिको संसद्मा सभामुख थिए। आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।